Walaalihii Maalqabeenada Noqday | Berberanews.com
Home Qubanaha Walaalihii Maalqabeenada Noqday
Dad badan ayaa waayadii hore iyo dunida cusuba si adag ku noqday maalqabeen, iyagoo soo maray wakhti adag iyo marxalado kala duwan. Laakiin haddana waxa jira dad si yar oo dhib yar oo cajiib ah iyagoo maskax iyo sababo macquul ah adeegsanaya muddo kooban ku noqday maalqabeeno iyagoon filayn arintaasi.
Sannadkii 2009, oo dalka Maraykanka uu ka jiray dhaqaale xumo weyni, laba nin oo walaalo ah, oo lagu magacaabo Mike iyo Guy, oo midkood u dhismaha ka shaqaynaya , halka kalen uu lahaa meherad dhulka iyo guryaha kala iibisa. ayaa bilaabay inay hilibka digaaga ku iibiyaan meel baarkin ah oo baabuurta la dhigo qiime dhan $ 1.49 halkii Rodol. Qiimhaasi ayaa ahaa mid aad uga hooseeya qiimaha dalka guud ahaan lagu iibiyo waxase ay ku xidheen in qofku iibsado ugu yaraan 40 Rodol. Wkahtigaasi waxa aad isu taagay dhismaha iyo wax kala iibsiiga dhulka iyo guryaha taasi oo ku kelifat y inay shaqadan cusub hindisaan.
Walaalahan ayaa muddo yar gudaheed awood u yeeshay inay furan dukaan aad u weyn oo ka ganacsada hilibka Digaaga, iyagoo sameeyay lacago malaayiin doller ah. Waxa kale oo ay shaqaaleeyeen 80 qof oo xaruntooda ka sheqeeya. DHawr sano ka dib waxa ay heleen macmiil gaadhaya . Waxaana macmiil u noqday dad gaadhay 120 qof muddo kooban iyagoo gaadhsiiyay hantida ganacsigooda 70 milyan doller.
Previous articleSomaliland oo shaqo siisay gabadh lagu tacadiyay, xabsigana dhigtay dembiilihii
Next articleXogta Nashqadda cusub ee Drone-ta Turkiga